Dad dheeraad ah ayaa jadeecadu ku dhacday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cudurka jadeecada ayuu sababaa fiirus si sahlan ku faafa. sawir: CDC
Dad dheeraad ah ayaa jadeecadu ku dhacday
La daabacay fredag 5 januari 2018 kl 11.38
Labo qof oo dheraad aha ayaa la sheegay in laga helay jadeecada. Labadan qof oo kala ah qof caruur ah iyo qof weeyn ayaa degen magaalada Göteborg. Arrintan ayaa tirada dadka ilaa hada jadeecada laga helay ka dhigaysa 15.
Warkan ayuu u xaqiijiyey raadiyaha Sweden laantiisa P4 Göteborg madaxa dhakhaatiirta ka hortaga cuduradda fida Peter Ulleryd
-Haa waa run maanta waxan haaynaa 15 qof oo qaaday cudurka. Dhamaantooda waxa ay ku qaadeen deegaanka göteborg.
Ilaa hada waxa socda dadaal xoogan oo lagu doonayo in lagu xakameeyo jadeecada, iyada oo cisbitaalo badan ku jiraan heegan. Dadka cudurkan soo riday ayaa badankoodu ka howlgalaan cisbitaallada. Ulleryd oo la weeydiiyey in laga yaabo in jadeecadu sii fido ayaa sheegay.
-Suurtagal ma aha in la qiyaaso. Balse marka la eego in jadeecadu tahay cudur aad u fida iyo xaqiiqda ah in dad badan la kulmeen cid ay ka qaadi karayaan cudurka waan arki doonnaa dadka kale oo uu cudurkan ku dhaco.